Global Aawaj | भैँसीमा बेमौसमी प्रजनन सफल भैँसीमा बेमौसमी प्रजनन सफल
९ कार्तिक २०७८ 7:11 am
काठमाडाैं। दूध र मासुका लागि पालिने भैँसीको बेमौसमी प्रजनन गराउन नेपालका विज्ञहरू सफल भएका छन् । कृषि तथा वन विश्वविद्यालयले लामो समयदेखि भैँसीको बेमौसमी प्रजनन गराउन गरेको अनुसन्धान सफल भएको मुख्य अनुसन्धानकर्ता प्राडा भूमिनन्दन देवकोटाले बताए ।
“फागुन, चैतजस्ता सुक्खायाममा भैँसीको तनावयुक्त रस ‘फर्टिटोल’ उत्पादन हुन्छ । यसले प्रजननमा समस्या हुने गरेको हो”, प्राडा देवकोटाले भने, “पोसिला दाना र खानपिनमा ध्यान दिई भैँसीको शरीरमा हर्मन विकास गराएर फर्टिटोल कमजोर बनाउँदै डिम्बाशय सक्रिय गराई प्रजनन गराइने गरिएको छ ।”
कृषि तथा वन विश्वविद्यालयले चितवनको रामपुर भैँसी फर्म, पोखराको पशु विकास फर्म, सुनसरीको सररा पशु विकास फर्ममा रहेका भैँसीमा अनुसन्धान गरेको थियो । अहिले यो कार्य किसानका भैँसीमा पनि सुरु भइसकेको बताइन्छ । विश्वविद्यालयका पशु विज्ञानमा विद्यावारिधि र स्नातकोत्तर तहमा अध्यययनरत विद्यार्थीलाई यो अनुसन्धानमा परिचालन गरिएको छ । “हामीले विगत १५ वर्षदेखि भैँसीको बेमौसमी प्रजननबारे अध्ययन सुरु गरेका थियौँ । पछिल्ला पाँच वर्षदेखि विस्तारै यसले उपलब्धि दिन थालेको छ”, देवकोटाले भने ।
विश्वमा सयभन्दा बढी जातका भैँसी छन् । तीमध्ये नेपालमा पाँच जातका भैँसी पालन गरिएको पाइन्छ । नेपालमा स्थानीय चार (लिमे, पारकोटे, गड्डी र तराई जात ) र भारतबाट आयात भएको एक (मुर्रा) गरी पाँच जातका भैँसी पालन गरिएको हो । लिमे, पारकोटे र गड्डी पहाडी क्षेत्रमा पालिने भैँसी हो भने तराई भैँसी र मुर्रा तराईमा पालिएका छन् । मुर्रा भैँसी भारतबाट नेपाल भित्र्याइएका हुन् ।
विश्वविद्यालयअन्तर्गत पशु चिकित्सा विज्ञानतर्फका सहप्राध्यापक डा. सुवीर सिंह का अनुसार नेपालमा ५५ लाख भैँसी पालिएका छन् । नेपालमा उत्पादन हुने दूधमा ६४ प्रतिशत र मासुमा ५४ प्रतिशत हिस्सा भैँसीले ओगटेको छ । नेपालको कृषि उत्पादनमा धानपछि दोस्रो स्थान ओगटेको भैँसीमा भइरहेको बेमौसमी प्रजननको विकासले मासु र दूध उत्पादनमा अझ वृद्धि गराउन सकिने डा. सिंहको विश्वास छ ।
“नेपालका रैथाने भैँसी विस्तारै विस्थापित हँुदै भारतका मुर्रा भैँसी भित्रिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा बेमौसमी प्रजननमा ध्यान दिएर पनि रैथाने जातका भैँसीको संरक्षण गर्न जरुरी छ”, उनले भने । प्राप्त एक तथ्याङ्कअनुसार विश्वभरि रहेका सयभन्दा बढी प्रजातिका भैँसीमध्ये ९० प्रतिशतभन्दा बढी एसियामा छन् । भैँसीपालनका हिसाबले नेपाल विश्वकै पाँचौँ देशभित्र पर्छ । गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ।